Oromada oo shaaciyey inay ka go’ayaan Ethiopia | Caasimada Online
Home Warar Oromada oo shaaciyey inay ka go’ayaan Ethiopia
Oromada oo shaaciyey inay ka go’ayaan Ethiopia
Addis-Ababa (Caasimada Online) – Qowmiyadda Oromada ee dalka Ethiopia ayaa ku hanjabay inay ka go’ayaan Ethiopia kuna dhowaaqayaan dal cusub oo madax banaan.
Rabashado, Dibad baxyo iyo dagaal is ceyrsi ah ayaa ilaa November bilowgeedii ka socda magaalooyinka ay degaan Oromada ee dalka Itoobiya taasi oo keentay in dad badan ay ku dhintaan.
Qowmiyadda Oromada ayaa ka dibad baxaya waxa ay ugu yeereen jiritaankooda kadib markii ay dowladda Itoobiya ku sameysay dhul ballaarsi iyagoo hirgalisay qorshe loo bixiyay Master Plan, sidaa waxaa sheegay Afhayeen u hadlay dadka Oromada.
Qowmiyadda Oromada oo ah qowmiyadda ugu badan dalka Itoobiya, Itoobiya kaliya waxaa ku nool in ka badan 25 Milyan oo u dhasay Oromo, waxaa dalka ka taliya dadka laga tirada badan yahay ee Tigreega.
Qowmiyaddan waxaa ay ka sheeganayaan dhibaato, waxaa lagu soo xadgudbay dhulkooda, waxaa laga dilay in ka badan 100 qof tan iyo markii ay dibad baxyada bilowdeen horraantii November, waa markii ay ka go’I lahaayeen dalka Itoobiya sidaa waxaa ku qeyliyay qaar ka mid Jaaliyadaha Oromo ee dibadda ku nool.
Amnesty International ayaa December 16, daabacday in dowladda Itoobiya u marmarsiyootay Qowmiyadda Oromo, ku sheegtay in ay argigixiso yihiin ay keeni karto dhibaato xagga xuriyadaha ah.
Sabtidii December 19, 2015 Hay’adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dowladda Itoobiya ay dishay ilaa 75 ka tirsan qowmiyadda Itoobiya, arrintaas oo ilaa iyo hadda aanay ka jawaabin dowladda Itoobiya.